Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन दबाब, अरु को-को छन् दौडमा ?
गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन दबाब, अरु को-को छन् दौडमा ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनमा अलमल गरिरहेपनि पार्टीभित्र दबाब बढेको छ । उनीमाथि मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन छिटो गर्न दबाब आएपछि अमलम गर्न थालेका छन् । हिजोबाट पेरिसडाँडामा शुरु भएको नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित हुनुमा मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनको मापदण्डबारे कुरा नमिल्नु पनि कारण रहेको छ ।
दुई वर्ष पुरा भइसकेपनि केही मन्त्रीहरु भने सरकारमा रहनेछन् । उनीहरुले ओलीलाई संकट पर्दा साथ दिएका थिए । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर बादल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सरकारमै रहनेछन् ।
पोखरेल र बादलले ओलीलाई संकट आउँदा निकै साथ दिएका थिए । ज्ञवाली ओलीका विश्वासपात्र हुन् । उनलाई सञ्चारमा लाने तयारी भएको बुझिएको छ । उनी सरकारका प्रवक्ता तोकिनुमा यो पनि कारण देखिएको छ ।